RHA T10, nyocha ohuru RHA ekweisi | Gam akporosis
RHAReid Heath Audio bụ onye Britain na-emepụta ekwe ntị na ntị. Ọdịdị dị elu nke ngwaahịa ya na-eme RHA nzọ nzọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ mma na ekweisi na-adịgide adịgide.
N'oge anyị nwere ohere nyochaa RHA 750 ekweisi, ngwaahịa nke hapụrụ anyị nnukwu mmetụta. Ugbu a ọ bụ oge iji gosi gị ihe nzuzo niile nke Ọnụ ego RHA T10 na nyocha zuru ezu.
1 RHA T10, impeccable na mma imewe
2 Ọ dị mma, RHA T10 nwere impeccable imewe ma ọ dị ezigbo mma iji ya mana olee otu ha si ada?
3 Uru na ọghọm
RHA T10, impeccable na mma imewe
Tupu ị na-ekwu maka imewe, Achọrọ m ịkwado ngwaahịa ahụ n'onwe ya. Na, ọ bụ ezie na RHA T10 abụghị ekweisi dị ọnụ ala, ọnụahịa ya bụ euro 169, eziokwu bu na ngwugwu nke rutere n'ụlọ gị bụ ezigbo ihe ijuanya.
Ma ọ bụ na ọ bụghị naanị na ekweisi T10 na-abịa, mana ya na ha a na-etinye igbe ebu, usoro 10 nke ụfụfụ ụfụfụ nchekwa na ụfụfụ nke nha dị iche iche ka anyị nwee ike idozi ekweisi dịka ogo nke ntị anyị, gosipụtara na efere aluminom dị mma na nke bara uru, yana ụzọ nza abụọ abụọ iji hazie ekweisi dịka egwu anyị chọrọ ige ntị. .
Laghachi na nhazi nke ekweisi RHA T10i, a ghaghị ịmata na ọ bụ ngwaahịa na distills mma site na pore niile ma gosiputa oru di uku nke ndi otu ulo oru nke ndi Britain mere.
Iji malite T10 ejiri ya na igwe anaghị agba nchara, na-enye ọdịdị dị mma ma na-adịgide adịgide. Onwe m, ejiri m eziokwu ahụ na ekweisi na-adịtụ obere, mana n'ihe gbasara RHA T10 enwere m ike ijide n'aka na ha nwere eriri dị ogologo.
Ọtụtụ n'ime nguzogide a sitere na waya ọla kọpa nke na-enye nnukwu nguzogide ma nwee obi ụtọ na mmetụ ahụ. Na mgbakwunye, eziokwu ahụ bụ na ha ewepụla oxygen site n'ime ya na-enye ohere eziokwu na m hụrụ n'anya: ị gaghị echegbu onwe gbasara ekweisi gị na-agagharị. Ee, ọ dị oke njọ, ọ gaghị ekwe gị omume ịta ahụhụ nsogbu ahụ na RHA T10.
Ntụziaka nke isi okwu ka itinye anyị na ntị ha dị ezigbo mma, Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ọsụsọ na-agba gị nke ukwuu, na-eme egwuregwu dịka ọmụmaatụ, ọ ga-adịrị ha mfe ịtọghe ma ọ bụrụ na ị naghị eyi ha nke ọma, ọ dịghị ihe enweghị ike idozi site na itinye ekweisi ezigbo.
Versiondị nke anyị nwalere bụ ụdị T10i, nke jikọtara njikwa olu, ọ bụ ezie na ọ na-emegharị maka iOS ka ọ ghara ịrụ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ gam akporo, yabụ ana m akwado ka ị nweta ụdị RHA T10 nke na-efu 10 euro obere.
Nkwubi okwu m doro anya: Igweisi RHA T10 nwere ezigbo mma na iwu ha na-eme ka otu ihe doo anya: ekweisi ndị a ga-adị ogologo oge., ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n’uche na ụgbọ njem ahụ na-enye anyị ohere ịchekwa ekweisi anyị nke ọma, na-ewere obere mpempe ntị ntị naanị ma ọ bụrụ na nzacha. Ha dịkwa mma nke ukwuu iji, ịnwere ike iji ọtụtụ awa na-ege egwu na-agaghị ada ntị gị ka ọ na-eme na ekweisi ndị ọzọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eji visco na-agbanwe ekike ntị.
Ọ dị mma, RHA T10 nwere impeccable imewe ma ọ dị ezigbo mma iji ya mana olee otu ha si ada?
Dị ka m kwuru, Igwe isi RHA T10 gụnyere ihe nzacha ewepụ nke na-enye anyị ohere ịhazi ekweisi dabere na ụdị egwu na anyị ga-ege ntị. Ha gụnyere mgbanwe ndị ahụkarị "treble" "reference" na "bass". Ekwesịrị ikwu na ịtọpụ efere nzacha maka oge mbụ bụ ịta ahụhụ, mana ozugbo i mechara ya, egwuregwu ahụ ịtụgharị ma wepụ ihe nzacha dị iche iche dị mfe karị.
Dị ka ndị kere ya si kwuo, T10 na-atụ aro a ụda na-anọpụ iche na-enye ahụmịhe ziri ezi ọ bụ ezie na n'oge eziokwu ị nwere ike ịhụ na ha lekwasịrị anya na-emesi bass ahụ ike. M na-anwale niile atọ dị nzacha maka otu ọnwa, na m na uche na "treble" iyo bụ nke na-enye ndị kasị anọpụ iche ahụmahụ. Ka anyi chee ya ihu, odighi nma igbanwe ihe nzacha a dabere na ihe anyi choro ige nti, ya mere o ka nma ka ihapu uzo ntaneti ebe obu na obu ihe kachasi.
Soundda ya dị nnọọ mma, ọ bụ ezie Na ụdị dị iche iche dị ka nkume na ọla, ọ bụrụ na ịnweghị nza treble, ị ga-ata ahụhụ site na ụda olu na-akpasu iwe Nke ahụ na - ewepụ oke mma nke ekweisi ndị a. N'ezie, iji ekweisi ndị a na ụdị egwu ndị ọzọ dị ka Hip Hop ma ọ bụ ọbụna egwu oge gboo bụ ezigbo ọ delightụ. Ọ bụ eziokwu na e nwere ihe ngwọta ndị ezi uche dị na ha, dịka ekweisi AKG K3003, ekwesịrị icheta na ụdị ọnụahịa dị oke njọ na-eme ihe dị iche.
M onwe m na-eche na ekweisi RHA T10 na-enye ụda dị mma nke ga-egbo karịa mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ ọ bụ ezie na ndị ọkachamara na egwu ahụ nwere ike ịchọpụta na ị useụbiga ihe ókè.
N'iburu n'uche ogo nke njedebe ya, ihe karịrị ihe doro anya nke ngwaahịa na ogo nke ụda, echere m na RHA T10, nke anyị na-echeta efu 169 euro , bụ azịza ịtụle. RHA arụ nnukwu ọrụ ma ọ bụrụ na ha gaa n'ihu otu a, ha nwere ike bụrụ akara aka na ụlọ ọrụ ahụ.
Ogo nke imecha siri ike ịkọ na ngwaahịa nke ụdị a
Ke ofụri ofụri, audio itule bụ nnọọ mma, ọzọ ma ọ bụrụ na anyị na-atụle ya price
Ọnụ ego a abụghị na aka niile ruru
Bass na-ada ụda nke ukwuu
Ọnụ ego RHA T10
Qualityda dị mma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » RHA T10, nyocha nke otu n'ime ekwe ntị kacha mma na ahịa
Anyị na-akpọ ụfọdụ ekweisi RHA T10 ụfọdụ, ị ga-esonyere anyị?
Etu ị ga-esi nweta ọtụtụ ngwụcha ngwanrọ gam akporo anyị ma mee ka ha rụọ ọrụ nke ọma na ọgụgụ isi